Sababta Rasmiga Ah Ee Uu Edinson Cavani U Doonayo Inuu Uga Tago Manchester United Oo La Ogaaday | Laacibnet.net
HomeSuuqa Kala IibsigaSababta Rasmiga Ah Ee Uu Edinson Cavani U Doonayo Inuu Uga Tago Manchester United Oo La Ogaaday
Sababta Rasmiga Ah Ee Uu Edinson Cavani U Doonayo Inuu Uga Tago Manchester United Oo La Ogaaday
March 11, 2021 Balaleti
Uurka ay leeyahay gabadha ay saaxiibta yihiin Edinson Cavani ayaa la sheegay inay sabab u tahay in weeraryahanka uu qorsheynayo inuu dib ugu laabto South America.
Warbaahinta dalka Argentina ayaa qoreysa in gabadha moodalka ah ee Jocelyn Burgardt inay ku dhow yahay inay dhasho canugoodii labaad, waxayna doonayaan inay joogaan Uruguay bisha Juun si ay halkaas ugu dhasho.
Hugo Balassone oo ah joornaaliiste u shaqeeya TV-ga TyC Spors ee dalka Argentina ayaa sheegay in Jocelyn ay uur leeyahay islamarkaana ay ku laabatay Uruguay ka hor inta aan la gaarin dhalmadeeda.
Wuxuu sidoo kale sheegay in Cavani uu ka qaban qaaday daaficii hore ee Manchester United Marcos Rojo inay ku midoobi doonaan kooxda Boca Juniors ee dalka Argentina.
“Rojo ayaa sheegay inuu la kulmay Cavani iyadoo xiddiga reer Uruguay uu u sheegay isaga ‘ i sug aniga sababtoo ah Juun waan kula joogaa’.”
Arinta kale ee muhiimka ah ayaa ah in Cavani saaxiibtiis ay uur leeyahay islamarkaana ay ku nooshahay Uruguay.”
34 jirkaan ayaa la sheegayaa inuu insha ku hayo inuu u wareego Boca Juniors ka dib hal xilli ciyaareed uu joogay Manchester United inkastoo tababare Ole Gunnar Solskjaer uu sheegay Arbacadii inuu rajeynayo inuu ka dhaadhiciyo Cavani inuu sii joogo kooxda marka cimilada Manchester ay fiicnaato.
Aabihiis Luis ayaa sheegay in wiilkiisa uusan ku faraxsaneyn Manchester City islamarkaana uu doonayo inuu u dhawaado qoyskiisa.
Lamaanahaan ayaa sidoo kale heysta gabar labo sanno jir ah oo lagu magacaabo India iyadoo Cavani uu sidoo kale dhalay labo wiil oo lagu kala magacaabo Bautista iyo Lucas oo ay u dhashay xaaskiisa hore Maria Soledad Cabris.
Warbaahinta Argentian ee Infobae ayaa iyadana uurka Jocelyn ku sheegay mid ka mid ah seddex sababood uu weeraryahanka u doonayo inuu uga tago Old Trafford.
Waxay sidoo kale sheegeen inuu xiriir fiican la leeyahay madaxweyne ku xigeen Boca Juan Roman Riquelme iyo inuu weli ka careysan yahay ganaaxii seddexda kulan ee horaantii xilli ciyaareedkan markii uu isticmaalay ereyga Isbaanishka ee negrito.
Aqyaarta laacib iska saxa qoraalka qofka so qoray warbixintaan cafani kahadlayso waxyaabo badan ayaa ka qaldan afsomali ma yaqaan miyaaa